Shabaab oo sheikh u xiray fidinta Diinta Islaamka. | KEYDMEDIA ONLINE
Shabaab oo sheikh u xiray fidinta Diinta Islaamka.
Ceelbuur (Keydmedia) - Warar ay Keydmedia ka heshay degmada Ceelbuur ee goblka Galguduud ayaa waxa ay xaqiijinayaan in Maxamed Shaliif kooxda Shabaab ay gurigiisa kala bexeen kadib markii uu masjid ku yaalla degmadaasi uu maalintii jimcaha aheyd uu Shikhu ka istaagay oo uu jamacadii masjidka uu u jeediyay khudbad aakhiro leesku xasuusinayo.
Shiikha qabashadiisa kadib ayaan la’ogeyn halka lala aaday, waxaana kooxda afduubatay ay ku caan baxday in ay dad qabato kadibna la’ogaan wayo cir iyo dhul halka ay la’aadeen, waxaana maraca qaar ay ku gowracaan dadka ay qabtaan meela aan laga aqoon.
“Shikha gurigiisa ayaa galabtii jimcaha lagala baxay, wax uu geestay majiraan, masjidka ayuu khudbad kajediyay oo kali ah, meel lala aadayna manaqaanno”. Siwaa waxa yiri ruux kamid ah eheladiisa.
Kooxda Shabaab waxaa u caado ah in aysan ogoleyn ruux wax yaqanna oo isku keeni kara shacab si ay u dhageestaan hadalkiisa, waxaana kooxdu horay u khaarijisay aqoonyahanno, culimo caan ah, indher garad iyo odayaal dhaqameed si loo waayo cid wax laga maqlo oo aan Shabaab aheyn.